Useshe i-cbd - Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukudla & Isisindo
Inkinobho & Inkjet
I-Paint & Ukugqoka
Amafutha & Igesi
I-Cement & Ukhonkolo
Ifoni & Ikhebula
Imiphumela yokusesha ye: I-CBD ("cbd")
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusetshenziselwa ukukhishwa nokuhlukaniswa kwezakhi ezisebenzayo njenge-CBD, i-THC, i-CBG terpenes kusuka kwi-cannabis. Isizinda se-Ultrasonically-assisted (UAE) sisetshenziselwa ngempumelelo ukukhishwa kwama-cannabinoids ku-hemp nensangu. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene zokukhishwa kwe-batch nemodi yokugeleza eqhubekayo yamanani ukusuka kusilinganiso esincanyana nesiphakathi kuya kufinyelela ezingeni eliphelele lokuhweba ngamathani ambalwa ngehora.
Found 33 hits. 12 are being shown:
Amasu Okukhiqiza Okuphezulu Ekukhishweni Kwezitshalo
Ukuze ukhiqize okukhishwa kwekhwalithi ye-premium kusuka kuma-botanicals ngokusebenza kahle okukhulu, okusho ukuthi isivuno esikhulu sezikhangiso zekhwalithi ye-premium esikhathini esifushane sokukhipha, inqubo yokusebenza yokukhishwa ephezulu iyadingeka. Isizinda se-Ultrasonic inqubo yokuqinisa inqubo, evumela…
Ukuqedwa kwama-cannabinoids kuziphuzo ezidakayo
Ukukhiqizwa kweziphuzo ezifakwe insangu zombili, iziphuzo ezidakayo nezingezona ezotshwala, kuwumsebenzi onzima. Ukuze kuzuzwe ukuzinza kwesikhathi eside, ukubonakala okucacile kanye nokuthuthukiswa okufiswayo kwama-flavour kudinga ubuchwepheshe bokuxuba osebenza kahle futhi obunokwethenjelwa nokuhambisanayo…
Isizinda Samanzi Esibucayi Esithuthukisiwe Sithuthukiswe yi-Power Ultrasonics
Isizinda se-Ultrasonic sisodwa noma sihlanganiswe nezinye izindlela zokukhipha ezifana ne-solvent extraction noma i-supercritical CO2 extractors isetshenziswa ngempumelelo ukukhipha isibalo esigcwele sama-cannabinoids esitshalweni se-cannabis (i-hemp nensangu). Ensangu, okuyinhloko…
I-Crystallization yama-Cannabinoids nge-Sonication
I-crystallization yisinyathelo senqubo esidingekayo ukuze kuvezwe ukuhlukaniswa kwe-crystalline CBD. I-Ultrasonic nano-crystallization (i-sono-crystallization) isetshenziswa kakhulu ukulungiselela ukuhlukaniswa kwe-crystalline okufana ne-CBD ukuzihlukanisa nesisombululo se-supersaturated. Ngamaza amagagasi amakhulu e-ultrasound enamandla, ukukhathazeka okukhulu kuyakhuthaza…
Isizinda se-Chaga esisebenza kahle kakhulu nge-Sonication
Ama-Chaga mushroom (Inonotus obliquus) acebile ngama-phyto-chemical anamandla (isib. I-polysaccharides, i-betulinic acid, i-triterpenoids), eyaziwa ngokufaka isandla kwezempilo nasekulweni nezifo. Sebenzisa imvamisa ye-ultrasonic yamandla amakhulu ukukhishwa kwe-chaga kuyindlela ekhethwayo yokukhiqiza…
I-Ultrasonic Decarboxylation yama-Cannabinoids
Ama-cannabinoids ama-decarboxylated njenge-CBD, i-THC kanye ne-CBG phakathi kwamanye amaningi aziwa njengefomu elisebenzayo, elibonisa imiphumela ethinta kakhulu futhi ephumelelayo emzimbeni womuntu (isb uhlelo lwe-endocannbinoid). I-Ultrasonication inqubo ephumelela kakhulu ukukhipha…
IPectin Ephakeme Ithela Ngokukhishwa Kwe-Ultrasonic
Isizinda se-Ultrasonic siphumela ezithelweni eziphakeme zama-pectin ekhwalithi ephezulu. Kusetshenziswa i-sonication, ama-pectin abalulekile angakhiqizwa kahle kusuka kudoti wezithelo (isb., Ngemikhiqizo evela ekusetshenzisweni kwejusi) nokunye okokusebenza okuluhlaza. Isizinda se-Ultrasonic pectin sidlula amanye amasu wokukhipha nge…
Ukusetshenziswa kwe-Power Ultrasound kusetshenziswa Izimpondo ze-Ultrasonic
Izimpondo ze-Ultrasonic noma ama-probe asetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kokuphindaphindwa ketshezi okubandakanya ukufaka i-homogenization, ukuhlakazeka, ukugaya okumanzi, ukumisa emulsification, ukukhipha, ukuhlakazeka, ukuncibilika, nokuqeda amandla. Funda izisekelo mayelana nezimpondo ze-ultrasonic, ama-probe e-ultrasonic kanye nokusetshenziswa kwazo. Ultrasonic Horn vs Ultrasonic Probe Kaningi,…
Ijusi ne-Smoothie Homogenization isebenzisa i-Power Ultrasonics
Amajusi, ama-smoothies neziphuzo kudinga i-homogenization enokwethenjelwa futhi esebenza kahle ukuhlinzeka ukunambitheka nokuthungwa okuhle kanye nokuzinza kwesikhathi eside. I-Ultrasonic high-shear homogenizers isetshenziswa kakhulu embonini yezokudla neziphuzo ukukhiqiza ujusi, iziphuzo, i-purees kanye…
Ultrasonic Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers (MIPs)
Ama-Polymer Ama-Molecularly Imprinted (MIPs) angamamukeli aklanywe ngokufakelwa anokukhetha okunqunyelwe ngaphambili kanye nokucaciswa kwesakhiwo esinikeziwe se-molecule noma yamakhemikhali. I-Ultrasonication ingathuthukisa izindlela ezahlukahlukene zama-polymers ashicilelwe ngamangqamuzana okwenza i-polymerization isebenze kahle futhi ithembeke.…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Olive Leaf Extract
Ukukhishwa kwamaqabunga e-Olive kuyisithako esinamandla sokudla kanye nokwelapha njengoba kuqukethe ama-antioxidants aqinile njenge-polyphenols oleuropein, i-hydroxytyrosol ne-verbascoside. Isizinda se-Ultrasonic kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhipha nokuhlukanisa izinto ezihlanganisa izinto eziphilayo ezinjenge polyphenols, flavones…
Indlela Esebenzayo Yokuyisusa Esetshenzisiwe Ye-Botanical Extracts
Ngabe ufuna isethaphu esinamandla nesinokwethenjelwa sokukhishwa ukuze ukhiqize izingcwecwe ezisezingeni eliphakeme ze-botanical? Lapha ungathola ukuqhathanisa kwamasu wokukhishwa okujwayelekile kufaka phakathi isizinda se-ultrasonic, isizinda se-supercritical CO2, isizinda se-ethanol, i-maceration phakathi kwabanye nezinzuzo zabo…
Isicelo sokwaziswa okwengeziwe
Uma ungakutholanga obekufuna, sicela uxhumane nathi!
Ikheli le-imeyili (elidingekayo)
umkhiqizo noma indawo yesithakazelo
Sicela uqaphele wethu Inqubomgomo yobumfihlo.
Ikhasi elilandelayo »
imprint & I-copyright